“Virtual training on Counseling” – AHRN-Myanmar
Pamphlets & Flipcharts
“Virtual training on Counseling”
By albert wilson — In Activities, slider	— 24/11/2020
နို၀င်ဘာလ ၁၉ ရက် နှင့် ၂၀ ရက် နေ့များတွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း မှ AHRN ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသော Peer Counselors, Counselors, Nurse-Counselors and Counseling Officers များကို “Refresher Counseling Training” သင်တန်းကို Microsoft Team Application အသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်းမှကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါသင်တန်းသို့ AHRN ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသော Peer Counselors, Counselors, Nurse-Counselors and Counseling Officers စုစုပေါင်း (၈၃)ယောက် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
မသဇင်သန်းနိုင် Program Coordinator (Counseling) မှ “Index Testing and Partner Notification ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ ဘာကြောင့် Index Testing and Partner Notification လုပ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးသနည်း၊ ၁၀ ဆင့်သော Index Testing လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ ရင်းနှီးသူများ (လက်တွဲဖော်များ) ၏ အကြမ်းဖက်ခြင်းခံရခြင်း ရှိ၊ မရှိကို မည်သို့စမ်းစစ်မည်နည်း၊ ရှိခဲ့ပါက မည်သို့ကူညီဆောင်ရွက်မည်နည်း၊ Community Based Screening (CBS), Second 90 (ART initiation)” စသော အကြောင်းအရာများ ကို သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။
AHRN ဝန်ထမ်းများသည် ဤသင်တန်းမှ သင်ယူလေ့လာခဲ့သည်များကို ၎င်းတို့နေထိုင်ရာ ဒေသများရှိ ပြည်သူလူထုများ ၊မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များအား အသိပညာမျှဝေခြင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပြီး Counseling လုပ်သောအခါတွင်လည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါသင်တန်းအား Access To Health Fund (AHF) and Global Fund ရံပုံငွေအဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးကူညီ ပါသည်။
A lively, well attended virtual refresher counseling training, was conducted on 19th and 20th November 2020 for AHRN Peer Counselors, Counselors, Nurse-Counselors and Counseling Officers from Kachin State, Shan State and Sagaing Region. The 83 of AHRN Peer Counselors, Counselors, Nurse-Counselors and Counseling Officers proactively participated in this 2-day Virtual Counseling training.
Thazin Than Naing – Program Coordinator (Counseling) has provided training on “What is Index Testing and Partner Notification? Why it is important? 10 Steps of Index Testing, Intimate Partner Violence Risk Assessment and Response, Community Based Screening (CBS), Second 90 (ART initiation)”.
AHRN staff will apply the gained knowledge and skills while providing counseling to community members, people who use drugs (PWID) and their family members.
This Training is funded by Access to Health Fund and Global Fund
Archives Select Month	May 2022 (10) April 2022 (1) March 2022 (2) February 2022 (2) February 2021 (1) December 2020 (3) November 2020 (4) October 2020 (1) September 2020 (2) August 2020 (1) July 2020 (7) June 2020 (3) May 2020 (6) April 2020 (11) March 2020 (3) February 2020 (2) January 2020 (2) December 2019 (2) October 2019 (1) July 2019 (11) November 2018 (2) October 2018 (6) August 2018 (3) July 2018 (4) April 2018 (1) September 2017 (3) August 2017 (1) July 2017 (8) March 2017 (7) October 2016 (16) September 2016 (10) February 2014 (6)
Copyright © 2022, AHRN Myanmar All rights reserved.